Health Archives - Barnyar Barnyar
ရှောက်ပင်တပင်လည်း အိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်ပါတယ်…
June 30, 2022 linn htet 0
ရှောက်ပင်တပင်လည်း အိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်ပါတယ်… ရှောက်ရွက်အစွမ်း-အံ့မခမ်း မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကို စားထားရင် အဲဒီ တစ်လလုံး လေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကား ရှိပါတယ်။ ရှောက်ရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ ဟင်းခါးချက်ပြီး အမြဲတမ်း သောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါ ပျောက်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်များပြီး၊ […]
အိမ်တိုင်းမှာ ရဲယိုပင်တပင်လည်း စိုက်ထားသင့်ပါတယ်… “ဒေါက်တာအောင်စိုးဝင်းပြောသော ရဲယိုအကြောင်း သိကောင်းစရာများ” မေး 👉 ရဲယိုက ဆေးလား ❓ ဖြေ 👉 ရဲယိုသည် ဆေးမဟုတ်ပါ။ ဆေးထက် အဆင့်များစွာမြင့်မားပြီး သဘာဝအလေ့ကျ ပေါက်ရောက်သော အသီးတမျိုးပါ ။ မေး 👉 ရဲယိုသီးကို ဘာရောဂါမှ […]
June 11, 2022 thanzin laypyay 0
အိမ်တိုင်းမှာ မုရိုးပင်တပင်တော့ စိုက်ထားသင့်ပါတယ်… အရိုးတစ်ချောင်းမှာ အရွက်က တစ်ဖက်တစ်ချက် ထွက်ပြီး အကိုင်းဖျားအထိ အရွက်က အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့်၊ အမွှေးနုပါတဲ့ဖက်က အဖြူရောင်ဖက်ကို နဲနဲယိမ်းပါတယ်။ အသီးက စိမ်တစ်လုံး သရက်လို ပုံသဏ္ဌာန်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထဲမှာက လေအပွသီး ဝတ်ဆံအနက်နဲ့၊ အမွှေးမျှင်မျှင်တွေ လေမှာပျံပြီး မျိုးပွားတယ်။ ACID […]
လိပ်ခေါင်း -ရောဂါ -သက်သာ- ပျောက်ကင်း -စေဖို့ -ဆေးနည်း
လိပ်ခေါင်း -ရောဂါ -သက်သာ- ပျောက်ကင်း -စေဖို့ -ဆေးနည်း လိပ်ခေါင်း ရောဂါ ဝေဒနာကို ခံစား နေရသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ ပို့စ်လေး တင်လိုက်တာပါ… ။ တစ်ကယ်လို့ မိတ်ဆွေမှာ ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်မိ […]
“အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို ဂျင်းကို မြို ”
May 27, 2022 thanzin laypyay 0
“အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို ဂျင်းကို မြို ” မှတ်သားဖွယ်ရာ တိဗက်ဆရာတော် တစ်ပါး၏ နည်းလေးပါ… မြန်မာနိုင်ငံမှဆရာဝန်တစ်ဦး တိဗက်နိုင်ငံကို အလည်အပတ် ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်,,, ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ ညွှန်ကြားမှု ဖြင့် တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ တည်းခိုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်… ။ ထိုဘုန်းကြီးတော်ကြီးကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် လက်ထောက်ဆရာတော်တို့မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို အတော်အသင့် […]
ကျောက်ကပ်-Kidney ပျက်စီးပြီဆိုရင် သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ-(၉)မျိုး
ကျောက်ကပ်-Kidney ပျက်စီးပြီဆိုရင် သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ-(၉)မျိုး ကျောက်ကပ်ရောဂါဟာ… ထူးခြားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့အတွက် ရောဂါကျွမ်းတဲ့ အခြေအနေရောက်မှသာ သိကြတာမို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားမိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. အချိန်တိုင်းလိုလို မောပန်းနေခြင်း… ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ များလာစေသလို သွေးမသန့်တော့တာကြောင့် မောပန်းပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်း လာတတ်ပါတယ်…။ […]
အေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာ လေးဘက်နာသမားလေးတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ ဒုက္ခများ
အေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာ လေးဘက်နာသမားလေးတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ ဒုက္ခများ အအေးလေးနည်းနည်းပိုပြီဆိုတာနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတတ်တဲ့သူတွေကတော့… လေးဘက်နာသမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ။ ပုံမှန်လူတွေအဖို့ သူတို့က ထူးဆန်းစရာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်… ။ ဒီလောက်လေးအေးတာ ဘာဖြစ်နေလဲပေါ့… ။ ဒါပေမဲ့ လေးဘက်နာသမားအချင်းချင်း ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို နားလည် ပေးနိုင်မှာပါ… ။ (၁)အဆစ်တွေ ကိုက်လာတယ်… […]
ပန်ကာဖွင့်ပြီးအိပ်တာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးအများကြီးဖြစ်စေနိုင် ရာသီဥတုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပူပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သာမန်လူတန်းစားတွေအဖို့ ပန်ကာတွေဟာ သုံးတည့်လာပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာ အပူဒဏ်သက်သာစွာနဲ့ အိပ်ပျော်အောင်လို့ဆိုပြီး ပန်ကာတှေကို ဖွင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်… ညဘက်မှာ ပန်ကာဖွင့်ပြီး အိပ်တာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုး အများကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး ပန်ကာဖွင့်ပြီးတော့ အိပ်စက်ခြင်း… ပန်ကာလေဟာ အခန်းတွင်းမှာပဲ […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သေဆုံးမှုအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ နှလုံးရောဂါထဖောက်တာကလည်း ထိပ်ဆုံးအကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ UK မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်တစ် လူသတ်သမားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ UK မှာ နှစ်တိုင်းလိုလို လူပေါင်း ၁၆၀,၀၀၀ ကနှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးကြရတာပါ ။ ဒါကြောင့်လည်း သင့်မှာနှလုံးရောဂါရှိနေရင် နှလုံးရောဂါထဖောက်မယ့် လက္ခဏာတွေကိုသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုသိထားမယ်ဆိုရင် သင့်အသက်ကိုကယ်တာပါလို့ပြောလည်းမမှားပါဘူး။လူတော်တော်များများကတော့ နှလုံးရောဂါထဖောက်တယ်ဆိုတာက […]
Total Hits : 318533